(tonga teto avy amin'ny Nigeria)
I Nizeria na Nijeria (amin'ny fiteny anglisy: Nigeria), izany hoe Repoblika Federalin'i Nizeria (amin'ny teny anglisy Federal Republic of Nigeria), dia firenena ao amin'ny faritra afovoan'i Afrika ary firenena be mponina indrindra ao Afrika. Ny isa-mponiny tamin'ny taona 2011 dia 162 tapitrisa. Na dia firenena manan-karena aza i Nizeria amin'ny famokarany solitany be dia be, dia mahantra ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ilay firenena. Ny antony mahatonga izay dia ny fisian'ny kolikoly. Na dia izany aza, firenena faharoa lehibe indrindra ara-toekarena i Nizeria, aorian'i Afrika Atsimo ary eo alohan'i Ejipta. Ny fifidianana izay nitranga tamin'ny taona 2011 no lazain'ny fianankaviambe iraisam-pirenena fa malalaka sy mangarahara indrindra hatry ny fahaleovan-tenan'ilay firenena tamin'ny 1960.
Manomboka ny taona 1991, i Abuja no renivohitr'i Nizeria. Ny fiteny ofisialy dia ny fiteny anglisy, ireo lazaina fa tenim-pirenena dia ny fiteny iôroba sy ny fiteny igbô ao atsimo ary ny fiteny haosa izay tenenina any amin'ny faritra avaratr'i Nizeria.
Ao amin'i helodranon'i Ginea no misy an'i Nizeria. Ny halava manontolon'ny sisintanin'i Nizeria dia 4 047 km; ary 853 km no halavan'ny morontsirak'i Nizeria. Ny firenena mizara sisintany amin'i Nizeria dia i Kamerona sy i Nizera ary i Tsady.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nizeria&oldid=997009"
Voaova farany tamin'ny 13 Septambra 2020 amin'ny 09:23 ity pejy ity.